Ithemba ledayimani elifanelekileyo kunye nembali - isiqalekiso kunye nexabiso
idayimani, Ithemba, Ndiyathemba Idayimani
Ithemba iDayimane yi-45.52 carat yedayimani eluhlaza okwesibhakabhaka. Idayimani enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka eyakha yafunyanwa ukuza kuthi ga ngoku. Ithemba ligama losapho olwalungumnini walo ukusukela ngo-1824. Kukuphinda kudayimane okuvela "IBleu de France". Isithsaba sibiwe ngo-1792. Sachithwa e-Indiya. Ithemba iDayimani lidume ngokuba yidayimani eqalekisiweyo, kuba abanye babanini bayo ngokulandelelana bayazi ukuba isiphelo sineengxaki. Namhlanje kuphakathi kwemiboniso kwiMyuziyam kaZwelonke yeMbali yeNdalo eWashington, DC, United States.
Ixabiso leDayimane lembali kwimbali | Ndiyathemba isiqalekiso sedayimane | Ithemba iDayimani lifanelekile
Ihlelwe njengodayimani wohlobo IIb.
Idayimani iye yathelekiswa ngobukhulu nokuma kwayo neqanda lehobe, i-walnut, “emile okweeperile.” Ubungakanani ngokobude, ububanzi, kunye nobunzulu zii-25.60 mm × 21.78 mm × 12.00 mm (1 kwi-x 7/8 kwi-x 15/32 kwi).
Ichazwe njengombala omnyama omnyama ongwevu-luhlaza 'kunye nokuba "mnyama ngombala oluhlaza" okanye umbala "oluhlaza-oluhlaza".
Eli litye libonisa uhlobo olukhanyayo ngokungaqhelekanga nolunemibala eqaqambileyo: emva kokuvezwa kukukhanya kwe-ultraviolet emfutshane, idayimani ivelisa ukukhanya okubomvu okuqaqambileyo okuqhubeka okwexeshana emva kokuba icinyiwe, kwaye olu phawu lungaqhelekanga lunokunceda khuthaza igama layo lokuba uqalekisiwe.
Ukunqunyulwa kukuqaqamba kwe-antique ebhinqileyo enebhanti enezinto kunye namacala ongezelelweyo kwibala.
Idayimani yabuyiselwa eFrance ngumhambi uJean-Baptiste Tavernier, owayithengisa kuKing Louis XIV. Intsomi yedayimane, ephinda iphinda ityhilwe, ithi ilitye labiwa kumfanekiso wesithixokazi uSitâ. Kodwa ibali elahluke ngokupheleleyo lafunyanwa ngo-2007 ngu-François Farges wase-Muséum National d'histoire naturelle eParis: idayimani yathengwa ngu-Tavernier, kwimakethi enkulu yedayimani eGolconde, xa wayesiya e-India phantsi kolawulo luka-Mughal. Abaphandi beMyuziyam yeMbali yezeNdalo bafumanise indawo yomgodi apho kukholelwa ukuba idayimane ivela khona kwaye ikumantla eAndhra Pradesh yanamhlanje. I-hypothesis yesibini kwimvelaphi yedayimane ikwangqinwa yindawo yokugcina u-Mughal yaseHyderabad. Amarhe aliqela afuna ukuba idayimane leThemba liqalekiswe kwaye libulale abo bangenayo: I-Tavernier yayiya kugqitywa ngamarhamncwa asendle, emva kokonakaliswa, xa ngokwenyani wasweleka ekwaluphaleni eMoscow, eneminyaka engama-84. U-Louis XIV wayenqunyulwe i-gem, eyahamba ukusuka kwi-112.5 ukuya kwi-67.5 carats, kwaye wabiza idayimani efumene "iViolet de France" (ngesiNgesi: French Blue, yiyo loo nto ukususwa kwegama langoku).
NgoSeptemba 1792, idayimane ibiwe kwivenkile yesizwe ngexesha lokubiwa kwezixhobo zeCrown zaseFrance. Idayimane namasela ayo bayayishiya iFransi besiya eNgilani. Eli litye lalibuyiswa apho ukuze lithengiswe ngokulula kwaye umkhondo walo ulahlekile kude kube li-1812, kanye iminyaka engamashumi amabini kunye neentsuku ezimbini emva kobusela, ixesha elaneleyo lokuba limiselwe.
Malunga no-1824, ilitye, elalisele lisikiwe ngumrhwebi kunye nomamkeli uDaniel Eliason, lathengiswa kuThomas Hope, umnini-bhanki waseLondon, ilungu lomnini osisityebi owayenebhanki iThemba & Co., nowafa ngo-1831. Ilitye sisihloko se-inshurensi yobomi ebhalwe ngumninawa wakhe, yena uqobo wayengumqokeleli gem, uHenry Philip Hope, kwaye uqhutywa ngumhlolokazi kaThomas, uLouisa de la Poer Beresford. Ukuhlala ezandleni zeThemba, idayimane ngoku ithatha igama labo kwaye iyavela kuluhlu lukaHenry Philip emva kokubhubha kwakhe (ngaphandle kwenzala) ngo-1839.
Unyana wamazibulo kaThomas Hope, uHenry Thomas Hope (1807-1862), walizuza njengelifa: ilitye laboniswa eLondon ngo-1851 ngexesha leMiboniso eNkulu, emva koko eParis, ngexesha lomboniso ka-1855. Ngo-1861, intombi yakhe eyamkelweyo uHenrietta, yedwa , utshata noHenry Pelham-Clinton (1834-1879) osele engutata wenkwenkwe: kodwa uHenrietta woyika ukuba unyana wakhe wokuzalwa uza kudlala ithamsanqa losapho, ngenxa yoko wenza “itrasti” aze adlulisele umphangi kumzukulwana wakhe, uHenry Francis Ithemba uPelham-Clinton (1866-1941). Walifumana njenge-inshurensi yobomi ngo-1887; angazihlukanisa nelitye kuphela ngokugunyaziswa yinkundla kunye nebhodi yetrasti. UHenry Francis uphila ngaphaya kwamandla akhe kwaye ubangelwe kukungabinamali yintsapho yakhe ngo-1897. Inkosikazi yakhe, umdlali weqonga uMay Yohé (in), ubabonelela ngeemfuno zabo bodwa. Ngethuba inkundla yamsusa ukuba athengise ilitye ukunceda ukuhlawula amatyala akhe, ngo-1901, uMeyi washiya enye indoda e-United States. UHenry Francis Hope Pelham-Clinton uphinda athengise eli litye ngo-1902 esiya eLondon ngamatye anqabileyo uAdolphe Weil, othengisela uMrhwebi waseMelika uSimon Frankel i $ 250,000.
Abanini abalandelanayo beThemba kwinkulungwane yamashumi amabini nguPierre Cartier, unyana wejewler eyaziwayo u-Alfred Cartier (ukusuka ngo-1910 ukuya ku-1911) oyithengisa nge-300,000 yeedola ku-Evalyn Walsh McLean. Kwakuphethwe ngo-1911 de kwasekufeni kwakhe ngo-1947, emva koko yadlulela ku-Harry Winston ngo-1949, owathi wakunika Iziko leSmith eWashington ngo-1958. Ukuze enze ukuba ukuthuthwa kwelitye kube nokuqonda kwaye kukhuseleke kangangoko, uWinston ulithumela eSmithsonian ngeposi, kwipasile encinci esongelwe kwiphepha lekrafti. Ukuhlala kwedayimani eluhlaza okwesibhakabhaka enkulu eyakhe yafunyanwa ukuza kuthi ga ngoku, idayimane isabonakala kwiziko elidumileyo, apho izuza kwigumbi eligciniweyo: yeyona nto yesibini kwezobugcisa eyaziwayo emhlabeni (iindwendwe ezizizigidi ezithandathu zonyaka) emva kweMona Lisa I-Louvre (izigidi ezisibhozo zeendwendwe zonyaka).
Ngaba iThemba leTiam liqalekisiwe?
The idayimani Yahlala kunye nosapho lwasebukhosini lwaseFrance de yabiwa ngo-1792 ngexesha lovukelo lwaseFrance. ULouis XIV noMarie Antoinette, abanqunyulwa iintloko, bahlala bekhankanywa njengamaxhoba isiqalekiso. The Ithemba yedayimane yeyona idumileyo Uqalekisile idayimani emhlabeni, kodwa inye kuphela kuninzi.
Ngubani okwangoku ongumnini wedayimani yethemba?
Iziko leSmithsonian kunye naBantu baseMelika. I-Smithsonian Institution, eyaziwa ngokuba yi-Smithsonian, liqela leemyuziyam kunye namaziko ophando alawulwa nguRhulumente wase-United States.
Ngaba Ithemba leDayimane kwiTitanic?
Intliziyo yoLwandle kwifilimu yeTitanic ayisiyonto yokwenene yobucwebe, kodwa ithandwa kakhulu nangona kunjalo. Ubucwebe kodwa busekwe kwidayimane yokwenyani, i-45.52 carat iThemba leDiamond.
Ngaba iThemba leDayimane sisafire?
Idayimani yethemba ayisosafire kodwa yeyona dayimani inkulu eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngaba iThemba leDayimane liyaboniswa ngokwenene?
Ewe yiyo. Ithemba lokwenyani leDayimane liyinxalenye yengqokelela yemyuziyam esisigxina kwaye inokubonwa kwiMyuziyam kaZwelonke yeMbali yezeNdalo eWashington, DC, United States. Kwigalari yeHarry Winston, ebizwa ngokuba yijewler yaseNew York enikeze ngedayimani kwimyuziyam.
Ixabiso ledayimani leThemba lixabisa ntoni namhlanje?
I-Blue Hope Diamond lilitye elihle elinombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nembali ebangel 'umdla. Kule mihla, le dayimani inobunzima be-45,52 carat kwaye ixabisa i-250 yezigidi zeedola.
umhla umnini ixabiso
Ixabiso lexabiso ledayimane ngo-1653 UJean-Baptiste Tavernier Iincwadi ze-450000
Ixabiso lexabiso ledayimane ngo-1901 UAdolph Weil, umrhwebi wezacholo waseLondon $ 148,000
Ixabiso lexabiso ledayimane ngo-1911 U-Edward Beale McLean kunye no-Evalyn Walsh McLean $ 180,000
Ixabiso lexabiso ledayimane ngo-1958 Imyuziyam yaseSmithsonian $ 200- $ 250 yezigidi
Ngaba ukhona umntu owake wazama ukuba iThemba leDiamond?
NgoSeptemba 11, 1792, iThemba leDiamond labiwa endlwini eligcina iigugu zesithsaba. Idayimane namasela ayo bayayishiya iFransi besiya eNgilani. Ilitye laliphindwa apho ukuze lithengiswe ngokulula kwaye umkhondo walo ulahlekile kude kube li-1812
Ngaba likho iwele kwiThemba leDiamond?
Ithuba lokuba idayimani yaseBrunswick eBlue kunye nePirie isenokuba ngamatye oodade kwiThemba ibingumbono wothando kodwa ayiyonyani.
Kutheni idayimani yethemba ibiza kangaka?
Umbala oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka wedayimani yeThemba sesona sizathu siphambili sokuba uninzi lwabantu lukholelwe ukuba aluxabisekanga. Iidayimani ezingenambala ngokwenene, enyanisweni, zinqabile kwaye ziphumla kwelinye icala lombala. Kwelinye icala apho iidayimani ezimthubi.
Ngaba Ithemba ledayimani yidayimani enkulu emhlabeni?
Yeyona dayimani inkulu eluhlaza elizweni. Kodwa iDayimani yeJubili yeGolide, idayimani emdaka ebomvu engama-545.67, yeyona dayimani inkulu isikiweyo nenamacala ahlukeneyo emhlabeni.
iqoqo elitsha lelitye
Iliso lekati likaSillimanite
Ilitye lenyanga elimnyama
Iglasi ezele iruby